Chọpụta ụlọ ọrụ na-eleta saịtị gị | Martech Zone
Izu a ka m gara ọmarịcha ngagharị nke Nchọpụta Nchọpụta?. Demandbase Stream bụ ihe Igwe ikuku ngwa na-enye gị ohere ileba anya na ntanetị weebụ gị ozugbo.
David Lieberman, Onye isi oche nke Business Development na-akọwa Demandbase Stream:
Demandbase Stream bụ ngwa Weebụ na-enweghị ihe nchọgharị na-enyere ndị ahịa na ndị ahịa aka ịchọpụta azụmahịa ndị na-eleta weebụsaịtị ha, ihe ọdịmma ha bụ, na ndị ha ga-akpọtụrụ. Site na nbudata ya free Nchọpụta Nchọpụta? Ngwá ọrụ na ijikọ ya na saịtị Weebụ na Demandbase Direct ?, onye ọ bụla nwere ike ịtụgharị nleta Weebụ na-eduga na ahịa na-eduga.
Site na akara nke na-agafe n'ofe desktọọpụ ndị ọrụ nwere ike ịlele ozi gbasara azụmahịa azụmahịa, nkọwa ụlọ ọrụ, na kọntaktị akwadoro na nkeji. Ndị ọrụ nwekwara ike ịtọ mmasị iji nyochaa okporo ụzọ site na mpụga mpaghara ahịa ma ọ bụ site na ndị na-enye ọrụ Internetntanetị (ISP).
Nke a gbanwere ụlọ ọrụ n'ezie! Ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ na B2B, ị na-enwe ike ịchọpụta ụlọ ọrụ ndị debanyere aha na saịtị gị site na oku na-aga (nbudata akwụkwọ akụkọ, webinar, wdg) na ndị ọbịa ndị ọzọ enweghị aha. Site na teknụzụ a, ị ga - ahụ onye nọ na saịtị gị n’oge!
Prodị Pro bụ ihe na-atọ ụtọ, nsuso na-enyere gị aka ibudata data firmagraphic! Ikwu okwu banyere onye na -edu oku. Ọ bụ ezie na ha enyeghị gị ozi ha, nke a ga-enyere gị aka iji nwayọ kpọtụrụ ụlọ ọrụ iji hụ ma ha chọrọ enyemaka ọ bụla. Nke a ga - emecha mee ka ahịa baa ụba!
Tags: ahia Bluetoothdigbydigby localpointiphone beta ulempaghara mobileebe maaraMari Smithelekọta mmadụ ibe edokọbaraigwe ojii
HD Video nwere ike ịbụ akụkụ nke ahịa gị Strategy
Dec 19, 2008 na 6:53 PM
Ngwá ọrụ ọhụrụ dị mma. Isi azụmahịa anyị mere ka ọ pụta na azụmaahịa ndị ọzọ, yabụ na nke a nwere ike inye aka. O yiri ka ọ ga-adị mma maka "ikpo ọkụ" na ndu ndu.